टेलिभिजनमा TRF - इनाम पुरस्कार - प्रेम, सेक्स र इन्टरनेट
मध्य-2016 ले इनाम पुरस्कारको सीईओ, मैरी शर्पलाई टेलिभिजनमा देखा परेको छ। तिनीहरूमध्ये केही छन्। फिलिम हाल बीबीसी अलबिका र बीबीसी द्वारा शुरु भएको कम्पनी द्वारा शुरु भएको 2019 मा देखाउने को लागी पूरा भएको छ।
बीबीसी स्कटल्यान्ड मा नौ
रिवार्ड फाउन्डेशनले बीबीसी स्कटल्यान्ड टिभीमा द नाइनमा मेरी शार्पलाई आमन्त्रित गरेको बेला यसको कामबारे छलफल गर्ने अवसर पाउँदा खुसी भयो। बिहीबार5मा वस्तुth डिसेम्बर 2019 यौन गलामा बृद्धि र अश्लीलताको लागि यसको लिंकको बारेमा थियो। उमेर प्रमाणीकरण सम्बन्धी मुद्दा पनि उठाइएको थियो र मेरीले बीबीसीमा र मिडियामा प्रसारण भएको गलत सूचनालाई सच्याउन सफल भएकी थिइन। डिजिटल इकोनॉमी एक्ट3को भाग 2017 मा समावेश उमेर प्रमाणीकरण कानूनको कार्यान्वयन यस वर्ष लाग्न लागेको थियो, तर स्थगित गरिएको छ, परित्याग गरिएको छैन। वास्तवमा यसमा संलग्न बेलायत सरकारका मन्त्रीले यसलाई अनलाइन हर्म्स बिलसँगै मिलाउने भनेर लिखित रूपमा पुष्टि गरेका छन्, ताकि व्यावसायिक वेबसाइटहरू र सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू मार्फत अश्‍लील कुराको पहुँच 18 भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा सीमित हुनेछ।
सेगमेन्ट द नाइनका पत्रकार फियोना स्टालकरले प्रश्न सोधेर शुरू गरे के यौनको समयमा अनावश्यक हिंसा "सामान्य" भइरहेको छ? यो धेरै प्रोफाईल आपराधिक घटनाहरूको परिणाम स्वरूप आउँदछ जुन 'रफ सेक्स गलत भएको गाउँ' को बचाव सुनेको छ। भर्खरको अनुसन्धानले देखाउँदछ कि बढ्दो संख्यामा युवती महिलाले पनि अनावश्यक हिंसाको अनुभव गरिरहेका छन्। के यो अश्‍लील सामग्रीलाई दोष दिन धेरै साधारण छ?
स्टूडियो होस्टहरू रेबेका कुरान र मार्टिन गिसलर त्यसोभए यो जटिल विषय पत्ता लगाउनको लागि यस पुरस्कार फाउन्डेशनकी अध्यक्ष मैरी शार्प र पत्रकार जेनी कन्स्टेबलको अन्तर्वार्ता लिए। भिडियो दुई भागमा छ।
स्कटिश गेलिक समुदायले यसको पहिलो कार्यक्रम 21 मार्च 2019 मा देखाइएको श्रृंखला एक Sgrudaire (अन्वेषक) श्रृंखलाको एक भागको रूपमा प्रसारणको साथ अश्लीलोगको प्रभावलाई समर्पित देखे।
Ruairidh Alastair समस्याहरु को बारे मा अधिक प्रश्नहरु संग जवान छ जो युवाहरु को जीवन को प्रभावित गर्दछ, र तिनीहरु संग विशेषज्ञहरु संग कुरा गरेर, हाम्रो प्यानलियहरुलाई सुन र उनको मोबाइल फोन र उनको बुटों को प्रयोग मा शोध गरेर जवाब खोज रहेको छ।
यस एपिसोडमा उनले अश्‍लील सामग्रीको लत र यसले के नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने बारे अनुसन्धान गर्दछ, युगमा जब पोर्नको पहुँच उच्च स्पीड इन्टर्नेट जडानहरू र मोबाइल फोनहरूको साथ कहिलै पनि सजिलो भएको छैन। यो एक्स्ट्र्याक्टमा देखाइएको छ रवाइरधले दी इनाम फाउन्डेशनबाट मेरी शार्पसँग गरेको छलफल।
बीबीसी उत्तरी आयरल्याण्ड
मरियम शार्पले टेलिभिजनमा फर्किए नोलान लाइभ 7th मार्च 2018 मा बीबीसी उत्तरी आयरल्यान्डमा। उनले अश्‍लील सामग्रीको प्रभाव बच्चाहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा होस्ट स्टीफन नोलनसँग एक अश्लील कार्यकर्ता र एक ठीक अश्लील दुर्व्यसनको साथ बहस गरीन्।